Kuedzwa Kwayedza - Hengtai (Hong Kong) share Co., Ltd.
Ita shuwa kuti zvigadzirwa zvekambani zvinosangana nezvinodiwa nevatengi, zvinopa hwaro hwekuongorora chigadzirwa, uye kuona mhando yechigadzirwa.
Ichi chiyero chinoshanda kune ese TFT module zvigadzirwa zvinogadzirwa neXX.
Magetsi kuyera muchina, bvunzo fixture, kukudza girazi, fluorescent mwenje, vernier caliper
Sampling chirongwa uye tarisa mamiriro ezvakatipoteredza
Iyo yekugadzira yuniti (kana maitiro QC) inoita yakazara kuongorora kwechitarisiko kuongorora uye magetsi kuita bvunzo, uye nehukuru chiyero kana yakakosha kuongorora, chidimbu chekutanga chemhando yega yega chakatemwa uye kuyedzwa 5pcs.
Iyo yemhando yuniti inoyera 5pcs yemuenzaniso wekutanga weimwe modhi, uye inotora iyo GB / -2012 yakajairwa kuongorora imwe-nguva sampling chirongwa chechitarisiko chekutarisa, uye yakajairika yekuyera chikamu chiri II.
Chikamu chisina kukodzera Chikamu chinotenderwa （AQL） Anokodzera mhando yakajairwa kuongororwa
Kushayikwa kukuru Kana saizi isina kukwana, 0 gamuchira 1 kudzoka
Muongorori anoda kupfeka rin'i ye electrostatic uye machira masere eminwe pamaoko ese maviri.Kana iri LCD isina polarizer yakasungirirwa, zvigunwe zvese zvinofanirwa kupfeka machira emunwe.
Muongorori anogona kutarisa kana kuenzanisa nefafura yekufananidza tafura.
Ndokumbira utarise kune iyo sampuli yeiyo bvunzo yemagetsi uchishandisa bvunzo fixture uye kuratidza skrini.
Iyo nhambwe iri pakati pemeso emuongorori uye chigadzirwa chiri 30 ~ 40 cm. Yekutarisa yekutarisa kona ndeye ± 15 madhigirii kumberi kwenzvimbo yakatwasuka yekuratidzira pani uye ± 45 madhigirii kumberi kwepamusoro peiyo yakatwasuka kuratidza pani (ona mufananidzo uri pazasi)
Zvigadzirwa zvemwenje: 800 ～ 1200LUX yekutarisa kunoonekwa
Nharaunda tembiricha: 25 ± 5 ℃
(1) Tsananguro yezvikanganiso poindi zvinokonzerwa nemapaneru emukati.
a) Mavara akajeka: akajeka, akaenzana-akaenzana matinji anoonekwa paLCD pasi peiyo nhema pateni.
b) Dots madema: Mune yakachena tsvuku, girini, uye bhuruu mifananidzo, matema madhiza ane akafanana saizi anoonekwa paLCD.
c) 2 points iri pedyo = 1 peya = 2 mapoinzi.
chinhu tsananguro Huwandu hunogamuchirwa MAJ MIN
Pfungwa huru random N≤3 √
Mbiri dziri pedyo N≤0
chinhambwe Chinhambwe chidiki pakati pemaviri akapenya mavara 5mm
rima nzvimbo random ≤4 √
Hwerengedzo yenhamba dzerima uye yakajeka nzvimbo N≤6 √
chinhambwe Chinhambwe chidiki pakati pemavara maviri akajeka (nzvimbo dzine rima) 5mm √
Zvidiki zvidiki D≤can be ignored，<D≤, N≤4,spacing≧5mmD（Point diameter） √